शुदुर-पश्चिममा भेटिए ८१ बर्षिय खिर बाजे : खिर बेचेरै जोडे करोडौंको सम्पति – Onlines Time
February 2, 2021 February 14, 2021 onlinestimeLeaveaComment on शुदुर-पश्चिममा भेटिए ८१ बर्षिय खिर बाजे : खिर बेचेरै जोडे करोडौंको सम्पति
यहाँ प्रश्न आर्थिक विकासको मात्रै होइन । राष्ट्रिय जीवनको हरेक अंगमा हामी विकसित नेपालको संवाहक हौं या शोषणका प्रवर्तक भन्ने हाम्रो कर्मको संरचनाले देखाइरहेको हुन्छ । यो यथार्थ बुझ्न धेरै ठूलो सैद्धान्तिक बहस गर्नुभन्दा ससाना क्रियाकलापहरूतिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
हामी निमुखा गरिबको स्वार्थका लागि भनेर औषधि किन्न रकम खर्च गर्छौं, जुन जनताले तिरेको कर हो । विकसित नेपालको परिकल्पना साकार तुल्याउन जनताबाट उठाएको रकम हो त्यो । यसको सदुपयोग समृद्ध नेपाल बनाउने मूल आधार हो भन्ने मान्यतालाई नयाँ परिवर्तनको चिन्तन बनाउने कि नबनाउने ? यो चिन्तनअनुसार आफूलाई रूपान्तरित गर्ने कि नगर्ने ?
हरेक शासनका मान्यताहरू हुन्छन् र ती मान्यताहरूका सन्दर्भमा सामाजिक संरचना पनि खडा भएको हुन्छ । नेपालमै जहानियाँ शासनको आफ्नै मान्यता थियो, जसअनुसार एउटा सानो समूहले राज्यशक्ति आफ्नो हितका लागि प्रयोग गर्थ्यो र यसप्रति उनीहरूमा इमानदारी थियो । जहानियाँ शासनको उद्देश्य जनताको सामाजिक र आर्थिक विकास थिएन । यो भ्रम र कल्पना उनीहरूमा थिएन । तर त्यसपछिका सबै पिँढीले ‘अब हामी नयाँ नेपाल बनाउँछौं, पुरानो मान्यताको ठाउँमा जनताकेन्द्रित मान्यता स्थापित गर्छौं’ भन्दै ठूलठूला भाषण मात्र गरे ।
ठूला दार्शनिक र चिन्तकहरूका तस्बिर र दृष्टिकोणले देश व्याप्त भयो । पुरानो भत्काउने र नयाँ संसार स्थापित गर्ने कल्पनाको भण्डार पास भयो । यस क्रममा जुलुस भए, सडक संघर्ष भए, बन्दुक संघर्ष भए, धेरैले ज्यान गुमाए । तर, आज हामी कहाँ छौं ? धेरै संरचनागत परिवर्तन पनि भए, परिवर्तन आत्मसात् गर्ने गगनभेदी नारा लागे तर फेरि इतिहासले हामीसँग ठट्टा गरेछ ।